HomeWararka CiyaarahaOusmane Dembele oo lagu Wargaliyay Inuusan Mar kale u Ciyaari doonin Barcelona
January 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay u sheegtay xiddiga garabka uga ciyaara ee Ousmane Dembele in uuna mar kale u ciyaari doonin kooxda reer Catalonia xilli lala xiriirinayo in uu ka tagayo Camp Nou.
24-sano jirkaan ayaa lix jeer kaliya kasoo muuqday La Liga kooxda Xavi xilli ciyaareedkan, qeyb ahaan waxaa sabab u ah maqnaanshiyaha dhaawaca, laakiin Dembele ayaa hadda la filayaa inuusan mar kale u ciyaarin Barca.
Dembele ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Liverpool , sida laga soo xigtay El Nacional, dhibaatooyinka dhaqaale ee Barcelona ayaa qeyb ka qaatay inay awoodi waayeen inay heshiis cusub ka saxiixdaan xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska.
The Mirror ayaa warineysa in Xavi uusan ku dari doonin xiddiga garabka ka ciyaara shaxdiisa maalinlaha ah isku daygooda ay ku doonayaan inay kooxda uga saaraan, waxaana laga yaabaa inay u baahdaan inay hoos u dhigaan qiimaha ay ku doonayaan si ay u iibsadaan.
Barcelona iyo Dembele ayaa lagu soo waramayaa inay ku heshiin waayeen heshiisyo cusub, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska uu qandaraaskiisu dhacayo xagaaga, sababtoo ah kooxdu waxay dooneysaa inay hoos u dhigto mushaarkiisa.
Dembele ayaa Camp Nou kaga soo biiray Borussia Dortmund sanadkii 2017, wuxuuna u dhaliyay 31 gool wuxuuna caawiyay 23 gool 129 kulan oo uu u saftay kooxda.